Ciwaanka quruxda badan ee buugga cusub ee Hillary Clinton ee ah “Maxaa dhacay?” ayaa waxaa loo turjuman karaa siyaabo badan. | Maalmahanews
Ciwaanka quruxda badan ee buugga cusub ee Hillary Clinton ee ah “Maxaa dhacay?” ayaa waxaa loo turjuman karaa siyaabo badan.
Inkasta oo ay akhristayaasha ku xidhantahay hadba sida ay u fasiranayaan waxa buugga ku qoran, haddana Clinton waxa ay buugga iyo waliba waraysiyo ay dhawaantan bixisay ku sheegaysaa faahfaahino kala duwan oo kugu filan in aad fahamto sidii ay wax u dhaceen.
Halkan waxaan kusoo koobaynaa waxyaabaha muhiimka ah ee Hillary u eersanayso in ay ugu guuldaraysatay doorashadii dhacday, taasoo keentay in buugaagta Clinton ay camirayaan khaanadaha iskafaalooyinka dukaamada buugaagta, halka Trump uu ku dangiigsanyahay kursiga xafiiska Oval ee Aqalka Cad.
“Haddii aanay ahaan lahayn farogalintii FBI ee maalmihii ugu dambeeyay, waan ku guulaysan lahayn Aqalka Cad” ayay buugga ku tiri Hillary Clinton.